Android wear 2.0 irikubudikira kune vamwe lg g tarisa r uye lg tarisa vashandisi veurbane
Kuru Nhau & Ongororo Android Wear 2.0 irikubudikira kune vamwe LG G Tarisa R uye LG Tarisa vashandisi veUrbane
Android Wear 2.0 irikubudikira kune vamwe LG G Tarisa R uye LG Tarisa vashandisi veUrbane
Reddit mushandisi smudger1000 & apos; s LG G Tarisa R kumhanya Wear 2.0 Iyo Android Wear 2.0 kuburitswa kwave kunetsa kutaura zvishoma, tichiona sekuti hapana kana mumwe wemidziyo inozivikanwa akaigamuchira izvozvi, angangoita maviri moths mushure mekutanga kwayo. Nekudaro, Reddit vashandisi veaviri akasiyana LG smartwatches, iyo LG G Tarisa R uye LG Tarisa Urbane , vazivisa kuwana iyo yekuvandudza.
Kunonoka, sezvo isu & apos; zvambotaurwa, zvaive zvichikonzerwa nesoftware bug, iyo kubvira yabatwa zvigamba . Zvakadaro, nepo kunonoka kuburitswa chiri chimwe chetsika yemidziyo mizhinji inomhanya chero kunhuhwirira kweAroid, varidzi veWear 2.0-yakasimbiswa michina vanga vachiri kugumburwa nekushaikwa kwekujeka pamusoro pebudiriro & apos; s matambudziko.
Kunyangwe paine & apos; s ichiri pasina chirevo chepamutemo kubva kuLG, isu tinotenda iyi ndiyo yekupedzisira, yakagadzika vhezheni yeWear 2.0 yemawadhi maviri, ichiunza huwandu hwese hwezvishandiso zvakagadziridzwa kusvika pa11.Nhamo, hapana maapos hapana izwi rine chekuita yeWatch Urbane 2nd Edition.
Android Wear 2.0 inounza zvinoverengeka zvezvinhu zvitsva papuratifomu, kusanganisira asi zvisina kuganhurirwa kune zveakazvimirira maapplication (ane avo, akasarudzika Play Store), swipe keyboard, uye izvo zvinonzi Matambudziko, ayo anoisa ruzivo kubva kune wechitatu-bato maapps chaipo pane wachi kumeso. Vashandisi veAdventurous vanogona kurodha pasi iyo yekuvandudza yeiyo LG G Tarisa uye Tarisa Urbane nemaoko ( rairo apa ), asi isu tichipa zano rekusaita zvakadaro izvozvi.
mabviro: Reddit ( 1 ), ( piri )
samsung galaxy tab 3 lite bhuku
Iyo OnePlus 9 iri kutengeswa pamutengo unoshamisa ne12GB RAM uye 256GB yekuchengetedza
Samsung Galaxy Note5 vs Samsung Galaxy Cherechedzo 4
Apple Watch Series 7 kuburitsa zuva, mutengo, maficha uye nhau
Screenshots inoratidza bhuruu Motorola DROID RAZR nekuburitswa kunotarisirwa May 17th
Iyo inotevera Apple TV inogona kuve ne420 120Hz yekuvandudza mwero
Apple & apos; s 9.7-inch iPad (yazvino modhi) iri kutengeswa ku Best Buy mu 32 uye 128GB akasiyana